ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲခြင်း – Burmese Baby
ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ကြောင့် အိပ်ရေးပျက်၊ အိပ်ရေးမဝ တဲ့မေမေများအတွက် နည်းလမ်းအချို့ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်
မေမေတို့ရေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်နော်။ အိပ်ပျော်မှ မေမေတို့ အားအင်တွေရှိပြီး ဗိုက်ထဲက ကလေးပါ ကျန်းမာသန်စွမ်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်မပျော်ဖြစ်နေတဲ့ မေမေများအတွက် အဖြေရှာပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အိပ်ပျော်ခြင်းကို ခက်ခဲစေတာ ဘာတွေကြောင့်လဲ ?
ဒါတွေကြောင့် အိပ်ပျော်ခြင်းကို အနှောက်အယှက်များစွာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း အိပ်မပျော်တာ ဖြစ်ခဲ့ရင် ဆရာဝန်ဆီ သွားဖို့လိုမလား ?
ရောဂါအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲ အိပ်မပျော်တာတွေ ဖြစ်နေခဲ့ရင် ဆရာဝန်အနေနဲ့လည်း အိပ်ပျော်အောင်အိပ်ပါ ဆိုတဲ့အဖြေကအပြင် တခြား ဘာမှကူညီပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်အတွင်း ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ?
အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်၊ အိပ်မပျော်နိုင်ဘူးဆိုတာ မေမေတို့ ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာ များစွာ မူတည်နေပါတယ်။ အပြောက ပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေထဲကလို ခြေထောက်နာနေလား၊ ကျောနာနေတာလား၊ ကြွက်တက်နေတာလား၊ ဗိုက်ကြီးပဲအရမ်းကြီးနေလို့ လေးလံနေလို့ အိပ်မပျော်တာပဲလား ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေနဲ့ ဆန်းစစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ယာဝင်ခါနီး မေမေတို့အနေနဲ့ နွားနို့ပူပူလေးတစ်ခွက်သောက်သုံးပေးတာ၊ ဒိန်ချဉ် နဲ့ ဌက်ပျောသီး ဖျော်ရည် သောက်သုံးပေးတာ ဒါတွေကိုလည်း အိပ်ယာဝင်ခါနီး သောက်သုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးက အိပ်ခါနီး ဘာမှမတွေးမိစေဖို့ သတိပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ပူပန်ဖိစီးမှုတွေက မေမေတို့ကို အကောင်းဆုံးနှောက်ယှက်စေပါတယ်။ အိပ်ခါနီး အသက်ရှုမှန်အောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်းကလည်း အိပ်ပျော်စေမယ့်နည်းလမ်းထဲက တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှုမဝတာကတော့ မေမေလောင်းများ အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ မွေးခါနီး တတိယသုံးလအတွင်းမှာ အများဆုံးခံစားရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် မေမေလောင်းတို့အနေနဲ့ ခေါင်းအုံးမြင့်မြင့်လေးထားပြီး အိပ်ပေးပါ။ ဒါဆို အသက်ရှုမဝတာကို သက်သာစေပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားဖို့အတွက် စိတ်ပူပန်မှုတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ချပေးပါ။ စိတ်ပူတာကတော့ ဖြစ်သင့်ပေမယ့် အိပ်ရေးကိုပါ ပျက်စေမယ်ဆိုလောက်ထိ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် မေမေလောင်းတို့အနေနဲ့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီး အိပ်ရေးဝဝအိပ်ရအောင် ပြုလုပ်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်နော်။